Ganacsatada Jaadka Ee Kenya Oo Ka Cadhooday “Tallaabo ay Qaaday Dowladda Soomaaliya” | Gaaroodi News
Ganacsatada Jaadka Ee Kenya Oo Ka Cadhooday “Tallaabo ay Qaaday Dowladda Soomaaliya”
Jaadka ayaa kamid ah waxyaabaha Kenya ay u dhoofiso Soomaaliya
Ganacsatada Qaadka ama jaadka ee dalka kenya ayaa sheegay inay khasaareen kumanaan doollar kadib markii sida ay sheegeen diyaarad siday Qaad dhan 13.6 tan oo u socotay magaalada Hargeysa ee Somaliland hawada laga soo celiyay.
“Jaadkaas qiimihiisu wuxuu ahaa 30 kun oo doollar, 25 kun oo doollar waxay noqoneysaa gaadiidka lagu qaadayo oo aan dib loo soo celin karin, waxaanu oggolaansho ka helnay hey’adda duulista rayidka ee Somaliland, waxwalbana sidii la rabay ayay ku socdeen ilaa markii dambe diyaaradda ay gashay hawada Soomaaliya, duuliyihii diyaaraddana lagu yiri waxaad siddaa shixnad sharci darro ah ee dib u laabo,”ayuu yiri Munjuri oo la hadlayay wargeydka Standard ee dalka Kenya.
Hargeysa oo inta badan jaadka uu uga iman jiray dalka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in khaad la’aan ay ka jirto, kadib markii ay rabshado ka dhaceen deegaanka Oromada oo ah halka laga keeni jiray. Kimathi Munjuri
Ganacsatada uu saameyay arrintan ayaa ah kuwa deegaanada Karama, Athiru, iyo Kanjoo ee dalka Kenya, kuwaas oo jaad tayadiisu sareyso u dhoofin jiray Soomaaliya.
“Kahor xanuunka corona, waxaan iibinta jaadka bil walba ka heli jiray soddon kun oo dollar, waxaana mushaar siin jiray shaqaale dhan 50 qof, balse qaar badan oo kamid hadda waa shaqo la’aan, kuwaas oo qaar kamid ah hadda ay anniga igu tiirsan yihiin, noolasha way nagu adag tahay hadda,”ayuu yiri Lichoro oo kamid ah ganacsatada khaadka oo la hadlayay wargeyska Nation.
Warbaahinta kenya ayaa kusoo warrantay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hawada ka celisay diyaaradda siday khaadka, si loo yareeyo faafidda feyraska Corona, haseyeeshee BBC-da si madaxbanaan uma xaqiijin karto sax ahaanshaha warkaas.
Maamulka hawada ayaa kamid ahaa waxyaabihii dhawaan Jabuuti ay uga wada hadleen dowladda federaalka iyo Somaliland, inkastoo aanan la garaneynin waxyaabaha lagu heshiiyay.
Cabashada ganacsatada jaadka ee dalka Kenya ayaa kusoo aaday xilli dhawaan magaalaad Hargeysa ay tageen wafdi ka socday dowladda Kenya iyo ganacsato uu hogaaminayay xildhibaan Junet Maxamed.